Uhlaziyo olutsha lwe-PUBG Mobile kunye nemephu yeSanhok nokunye okuninzi | I-Androidsis
[APK] Khuphela ngoku uhlaziyo lwePUBG Mobile ngemephu entsha 'iSanhok', umpu ovuthayo nokunye okuninzi
Omnye omtsha nomdala Uhlaziyo lwePUBG lweselfowni olusibeka phambi kwemephu entsha: iSanhok. Imephu yehlathi esikhumbuza nge-Vietnam apho umkhosi wase-US waqala khona imfazwe ngaphandle kokwazi ukuba kutheni. Ke hamba ulungiselela imephu eyahluke kakhulu kuneMiramar kunye ne-Erangel, ke izikhundla zobuchule kuya kufuneka zenze, kwaye okuninzi, kunye nabangalali.
Kodwa ngaphandle kokuba imephu yonke yemilinganiselo emincinci Njengamazwi amabini, sinokuthi siqhelane nombono wokuba ngoku "singatsalela ingqalelo" ngefrere ukuze ibhokisi ekhethekileyo iwele kwindawo yethu. Kwaye kuninzi okunjengompu omtsha ozenzekelayo, izinto ezingaphezulu ezongezelelekileyo zezixhobo kunye nesithuthi esitsha: «Imisipha yeMoto»
1 "Wamkelekile kwijangile"
2 Umpu ovuthayo
3 Izixhobo ezintsha kunye nesithuthi esinye
4 Izinto ezingakumbi kwiPUBG Mobile
Singaphantse cula ingoma yeGuns n Roses ukungena ngqo eSanhok, imephu egcwele ihlathi apho abalaleli baya kuba ngumhla wosuku. Enye indlela yokuqonda umdlalo uvela kwi-PUBG Mobile nge-0.8.0, Imfutshane nje ngo-0.7.0.
Ngeli thuba, iMidlalo yeTencent ikhuphe i-trailer ukuba ivule ukuluma okomzuzwana uhlaziyo olukhutshelweyo xa luqala iPUBG Mobile. Oko kukuthi, iya kuba ngumcimbi weeyure okanye ngomso wamva nje, unako hlaziya kumxhasi ofanayo womdlalo ukusuka kwiTencent.
Njengoko ubona kwitreyila yevidiyo, kuya kubakho nendawo eSanhok yezihlwitha ezinezithuba ezivulekileyo ngakumbi xa sisondela elunxwemeni, nangona izakuba kumhlaba ongaphakathi elizweni apho isenzo siza kubethabethana ngumoya, kwaye kube ngathi kuyabiwa (ngakumbi ukulungiselela abo balawulayo).
Enye yezona zinto zibalulekileyo zintsha ze-PUBG Mobile version 0.8.0 kukwaziswa kompu ovuthayo. Oku kuya kuba nomsebenzi omkhulu kwaye yi- nibe nako "ukubiza" ibhokisi enkulu eza kuza igcwele Isixhobo esihle kakhulu. Kodwa ikwanakho nokukhubazeka okukhulu, abanye abadlali baya kuhamba ngokungathi bayaphambana nayo, ke kuya kufuneka ubekwe kakuhle kwiqela lakho ukuze ukwazi ukuzikhusela kubo bonke.
Umpu ovuthayo uyakubiza ibhokisi ukuba singaphakathi kwendawo yokudlala, kwaye ukuba singaphandle, iya kuba yi-UAZ engenakubumbana ukubuyela kuyo ngeyona ndlela ifanelekileyo. Izicwangciso ezahlukeneyo zento entsha ekhethekileyo ekulindeleke ukuba inike iimfazwe ezininzi kunye nokudlala.
Izixhobo ezintsha kunye nesithuthi esinye
Sinefayile ye- umpu omtsha ozenzekelayo, iQBZ edubula iimbumbulu eziyi-5.56mm. Inokuzenzekelayo kunye nemowudi enye. Isixhobo esitsha sokucoca isityalo songeziwe kuhlaziyo olutsha. Oku kuya kuba noxanduva lokunciphisa "ukutshiza" kwesixhobo ngokuthe nkqo kwaye kwandisa ukujikeleza.
Olunye longezo olukhulu sesinye isithuthi esitsha: Imoto yezihlunu. Inezihlalo ezi-4 kwaye inenguqulelo eziguqukayo zombini njengenye "egutyungelweyo." Ke kwinguqulelo entsha sinezithuthi ezitsha ezibini, isihlunu kunye ne-UAZ ebonakala nompu ovuthayo.
Izinto ezingakumbi kwiPUBG Mobile
Njengoko kuqhele ukwenzeka kuPUBG uhlaziyo lweselfowuni, kananjalo Inani elilungileyo leempawu ezintsha zibandakanyiwe zincinci, nangona zihlala zinefuthe elikhulu kubuchwephesha bomdlalo. Zezi:
Ubungakanani bokuthatha ngoku bunokuchazwa kuseto.
Impumelelo: Zongezwe ezimbalwa. Banokufunyanwa phantsi "kweMishini".
Izinto ezikwisizwe: emva kokufumana uthotho lwezinto (nokuba kungokuthenga okanye ngethamsanqa), inkqubo iya kuvuza isixa esithile seCU kubadlali ukuze bakwazi yabelane ngayo namanye amalungu osapho.
Izihloko ezitsha zezindlu enokufakwa emva kokuthenga.
Ukwahlula iZizwe zezindlu: Eyona nto isebenzayo kwiveki kunye nexesha lonyaka ngoku zidwelisiwe.
Amanyathelo okulwa ukukopela-Ukukhohlisa ukwamkelwa kweplagi kuye kwaphuculwa kwaye ingxelo yamaqhosha yongezwa kwimowudi yokujonga, ulwazi olusisiseko kunye neziphumo.
Los ixesha elinomda izinto ngoku banokuqhaqha ngqo amanqaku e-BP (hooray!).
Inkqubela phambili yoLungiselelo-Ukuqokelela lonke iqhosha longeziwe ukuze ufumane yonke imbuyekezo evela kwimisebenzi egqityiweyo.
Yongezwe Iindidi ezintsha zeemishini zeRoyale Pass ukwenza ukuqhubela phambili kube mnandi.
Ithuba lokufumana ibhokisi eyimfihlakalo emva komdlalo. Iziqulatho zenzelwe wena.
Iphepha lesizini ngoku ibonisa onke amaxesha onyaka umdlalo kunye nedatha enomdla enje ngezihloko zonyaka, elona nqanaba liphezulu lifunyenweyo kunye nokunye.
Olunye uphuculo esele lukhona kumdlalo:
Abahlobo ngoku banokususwa kwibhetshi.
Iimodeli ze-3D ezongezwe kwisithuthi nakwiinqwelo-ntaka zeenqwelo moya zibonwa kwimbonakalo yasevenkile.
Oopopayi kwiphepha lonyaka belilungiselelwe kwiimodeli ezithile zesixhobo.
Umlilo wengozi ngengozi awuyi kwenziwa ngokwezifiso.
El Inkqubo yengxoxo yenziwe ngcono.
Izinto ezinokufunyanwa kwiibhokisi zomoya zilungiselelwe.
Kuzo zonke ezi ndaba zincinci, samkela amanyathelo okulwa ubushushu ngezandla ezivulekileyo kwaye ngoku sinokutshintsha izinto zexesha ngamanqaku eBP. A uhlaziyo olutsha lwe-PUBG Mobile oluzisa imephu entsha yeSanhok kwaye zonke ezo zinto zintsha zithi Yonwabele!
[Ihlaziyiwe] Ngoku unokukhuphela i-PUBG Mobile APK kuhlobo lwe-0.8.0. Xa uqala umdlalo, lonke uhlaziyo luya kukhuphela (kunokuthatha imizuzu eli-10 ukuya kwengama-30).
Khuphela i-APK: IPUBG Imfono 0.8.0
Ungalibali ukuya kwezi zikhokelo for yazi amaqhinga ama-5 enguqulo 0.7.0, kwaye lo ukuba abe ngumdlali ongcono kwi-PUBG Mobile, Ibalulekile!
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Imidlalo ye-Android » PUBG Imfono » [APK] Khuphela ngoku uhlaziyo lwePUBG Mobile ngemephu entsha 'iSanhok', umpu ovuthayo nokunye okuninzi